Betsaka zava-niseho tao Zimbaboe. Fintinina ato anatin'ity lahatsoratra ity.
Voadika ny 24 Avrily 2019 10:20 GMT
Zimbaboe : Niakatra an-tsehatra indroa miantoana i Zimbaboe tao amin'ny WSIS tao Tunis ny herinandro lasa teo. Nanao antso avo ny amin'ny tokony hampiatoana ny fampiasana ny aterineto ho fanimbazimbana ny fahalalahan'ireo firenena an-dalam-pandrosoana ny filoha Zimbaboeiana, Robert Mugabe.
“Ireo roa taona lasa ireo no nampiseho antsika ny fomba fampiasana ny teknolojiam-baovao sy fifandraisana (TIC) hanafihana ny fiandrianan'ireo firenena mahantra sy bitika. Miteny izany aho satria ny fireneko, i Zimbaboe, dia mitohy iharan'ny herisetra toy izany, iarahan'ny ao “Royaume unis” sy i Etazonia aza ny fampiasòna ny mahalehibe azy ara-informatika mba hamelezana ny fiandriananay amin'ny alalan'ireo fandaharana voakajy tsara natao hamporisihana fanozongozonana sy fandravàna ny fanjakana amin'ny fampizarazaràna. “
Ampangaina i Mugabe ho mametra ny betsaka amin'ireo fahalalahana ao Zimbaboe ho azy samy irery, anisan'izany ny fahalalahana haneho hevitra. Nanontany i Hope tao amin'ny This is Zimbabwe hoe : «manimba miandalana ny soatoavin'ny firenena» …? “fampihorohoroana anaty aterneto” …? ‘
Nandritra ilay seminera ‘Expression Under Repression‘ na ‘Fanehoankevitra ambany Famoretana’, tao amin'ny Kubatana.net, nizara ny fahitany ny andraikitry ny Aterneto eo anivon'ny firenena voageja i Taurai Maduna, tamin'ny fanipihana manokana fa tsy dia raisin'ny governemantan'i Mugabe ho mampahatahotra loatra ny Aterineto.
“Ambaran'i Taurai amintsika fa miasa tsy ankiafinafina ny Kubatana, miaraka amin'ny fahafantaran'ny governemanta Zimbaboeiana ary afaka mila amin'ny fanorisorenana, amin'ny ankapobeny dia noho ny governemanta tsy mihevitra ny aterineto ho toy ny fitaovana iray hanatonana ny vahoaka manontolo fa ho an'ireo vato nasondrotry ny tany tafita fotsiny ihany.”
Nandritra izany, i Hope tao amin'ny This is Zimbabwe no nahita kisoa nanidina tany ananty tatitra, hoe nambaran'I Mugabe ny nahitàna “oranioma” ao Zimbaboe.
Borondi : i Agathon Rwasa no manasongadina ny faharatsian'ny fifandraisana eo amin'ny filazambaovao nasionaly sy ny biraon'ny Firenena Mikambana any an-toerana, taorian'ny nahitàna fanamian'ny tafika mpampandry tany avy amin'ny Firenena Mikambana teny ampelan-tànan'ny FNL.
Mitatitra ny fisamborana ny lehiben'ny kabinetran'ny FNL ihany koa izy,
“Dingana goavana mankany amin'ny rariny ny nahasamborana voalohany ilay mpitarika ambony tao amin'ny FNL.
Ny Lehiben'ny Etamazaoron'ny FNL ao Bojombora, Aloys Nzabampema, no tompon'andraikitry ny fanomezana baiko ny miaramila izay nanatontosa ilay fandripahana sivily tao Gatumba ny 13 Aogositra 2004, izay “heloka bevava mifanohitra amin'ny maha-olona” eo anatrehan'ny lalàna iraisam-pirenena.
Amin'ny maha tompon'andraikitra ambony ao amin'ny FNL an'i Nzabampema, voatonontonona ihany koa izy tamin'ilay fanentanana nivelatra be sy fandripahana tsy niato nataon'ilay vondrona tamin’ ireo sivily, anisan'izany ny vela-pandrika nahazo ny “Titanic Express” ny 28 Desambra 2000. Tsy maintsy mandinika ireo porofon'ny nandraisany anjara na tsia tamin'io fanentanana io ireo manampahefana Borondey, izany mbola “heloka bevava mifanohitra amin'ny maha-olona” ihany koa.
R.D.K : Niresaka momba ny fifaliana noho ny fahitana taratasy karbôna azo itokisana amin'ny asany mahazatra i Carl,
Na aiza na aiza eto amin'ity firenena ity, eny amin'ny seranam-piaramanidina tsirairay izay alehantsika, atao amin'ny fomba taloha avokoa ny endri-pamenoana taratasy rehetra, miaraka amin'ny taratasy karbôna. Hameno ny drafitry ny zotram-piaramanidina ianao, tolorana taratasy voalamina tsara ho fenoina, karbôna 3 no manelanelana ny taratasy tsirairay. Iray tamin'ireo seranam-piaramanidina nalehako, nisy lehilahy nanao izany ho ahy tamin'ny milina fanoratana efa tranainy. Mikapokapoka an'io zavatra io izy ary toy ny mpilalao amin'ny sarimihetsika tamin’ ny Ady Lehibe Faharoa no fahatsapàko ny tenako. Efa tranainy ilay lambakely misy ny ranomainty, ary tapany mena sy tapany mainty ny soratra avoakany. Tena mbola miasa tsara anefa ilay taratasy karbôna.
Efa nilaozan'ny toetrandro ihany ilay izy, saingy mety tsara ao an-toerana satria toa tsy mety simba ilay taratasy karbôna. Singa iray manan-danja tsara heverina izany raha roa taona lasa izay nisy fitaovana fampiasa amin'ny birao farany nalefan'ny foibe ary ny mbola tsy hay na ho rahoviana ny manaraka.
Nanoritsoritra ny fidangan'ny vidina iaorta kely iray i 007 In Africa.
Farany, Adventures of a Retired Armchair Traveler no nanambara fa ilay ben'ny tanànan'i Roandà, Paul Bisengimana, ben'ny tanàna taloha tao Gikoro, dia niaiky ny helony tamin'ny fisian'ilay fandripahana.
Malaoi : Tamin'ny fanehoankeviny tao amin'ny WSIS, nanaiky ilay solosaina entin-tanana misanda 100 Dolara i Mike of Hacktivate.
Nasongadin'i Geeta ny fiovan'ny famahàna ny olana tao Malaoi teo anatrehan'ny ady atao amin'ny VIH/SIDA,
Araka ny nolazaiko tany amin'ny lahatsoratatro hafa, misy fikorosiana fahan'ny fandaharanasa ady atao amin'ny VIH sy Sida. Ny vondrom-piarahamonina fampandrosoana manontolo no tonga saina hoe tokony haitatra hatrany amin'ny distrika ny fomba nataon'i Malawi. Ny fitsidihana tany amin'ny faritra vitsivitsy ivelan'i Lilongwe dia afaka milaza amin'ny vahiny rehetra ny tena maha-zavadehibie azy io .
Raha mitsidika ireo biraon'ny komisariàn'ny distrika ianao (izay toy ny Praiminisitra ao amin'ny faritany, saingy ambanimbany kokoa ny fahefany sy ny vola eo am-pelatanany), holazainy aminao ny tsy fahampian'ny fitaovana, ny fiofanana, ny enti-manana, fahalalana ary fahaizana, ary na dia ny fizakantena hanao ny safidy ilaina momba izay hiatrehana ny VIH sy Sida eny amin'ny distrika aza. Raha mitsidika ny biraon'ireo mpandrindra ny ady amin'ny SIDA eny amin'ny distrika (DACs), ho hitanao ao koa fa tsy manana solosaina mba manoratra ny tatitra izay tokony ho alefany aza ny sasany, tsy misy manana Aterneto, ary ny sasany aza tsy manana fitoeran-taratasy hametrahana ny antontan-taratasy akory.
Naka fotoana mihitsy i George hanansongadinana ilay fifanarahana nisy teo amin'ny Nokia sy ny Grameen Foundation> Mikendry ny hanomezana saram-pifandraisana mora kokoa ho an'ny firenena andalam-pandrosoana ilay fifanarahana.
Tamin'ny fanolorany fanazavana voalohany avy aminy momba ilay korontana nampihovitrovitra an'i Kampala tamin'ny herinandro lasa teo, nomeny ny fanazavana ny antony nanombohan-dry zareo voalohany azy iny,
Raha ny hita dia toa noheverin'ny govenemanta ho fanapahan-kevitra hendry ny nisamborana sy nanagadrana ny iray tamin'ireo kandidà ho amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena, taorian'ilay hetsika natao teo amin'ny Oniversiten'i Makerere (mpianatra iray no maty novonoin'ny polisy) ary ny fihenjanana misy amin'izao fotoana izao mifandray amin'ny fanitsian-dry zareo ny lalampanorenana hamela ny Filoha Museveni hijanona mandrakizay eo amin'ny fitondrana (nesorina ny fetra fitondrana, izay aloha ny fahazoako azy).